यति साह्रो त नगर्नु नि ! « Jana Aastha News Online
यति साह्रो त नगर्नु नि !
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७३, बिहीबार ०७:४६
तनहुँको दमौली निवासी सुरेन्द्रबहादुर सापकोटा हाल भरतपुरस्थित दि फेमस महेन्द्र दल गणमा गणपति छन् । भदौ ३१ गते गणको वार्षिकोत्सव थियो । पहिलेदेखि नै सेनापतिलाई जसरी पनि ल्याउँछु भनेर कुर्लन्थे । ‘म सेनापतिको भाइ हुँ, ल केटा हो हेर सेनापति आउँछन् कि आउँदैनन्’ भनेर फूर्ति पनि लाएका थिए ।
यता आफ्नो जग्गा–जमिन भरतपुर विमानस्थलनजिक भएकाले सेनापति पनि आफ्नो अचल सम्पत्ति हेर्न र कर्णेल सापकोटालाई देखाउन वार्षिकोत्सवमा नजाने कुरै भएन । सेनापति र दाजु रमिन्द्र दुई–दुईवटा हेलिकप्टर लिएर भरतपुर ब्यारेक पुगे ।
सापकोटाले दिनहुँ अनावश्यक पाहुना बोलाएर भोजभतेर गरी पल्टनको ढुकुटी रित्याउँदै छन् । यतिसम्म कि घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ब्यारेक र बाहिरका होटलहरुमा २२–२४ वर्षे तरुनी केटी बोलाई हरेक शुक्रबार मोजमस्ती गरे । हामीले देखेका छौं, बोल्न भएन, रोजीरोटीको सवाल छ । सेनापतिको मान्छेलाई के नै गर्न सक्छौं र ? राति होटलमा मस्ती मार्ने अनि दिनको समय आफ्नो फूर्तिफार्ती देखाउन तिनै केटीलाई बंगलामा बोलाएर मेजमानी गराउने । अनि सानो कुरा ल्याउन ढिला भयो भने केटीहरुको अगाडि आमाचकारी गाली गर्ने । कमसेकम बाहिरिया केटीका अगाडि त हाम्रो इज्जत राखिदिनुप¥यो नि ! हाम्रो कमाइमा रजाईं गर्ने अनि हामीलाई नै दुव्र्यवहार गर्ने ?
यिनी गणपति भएपछि कुनै बोर्ड राखेका छैनन् । घरमा श्रीमतीले प्रयोग गर्ने स्याम्पु र क्रिम पनि पल्टनको पैसाले किनेर नक्कली बिल पेस गर्छन् । फेरी–फेरी ह्विस्की र जुस खान्छन् । जंगली जनावरको सुकुटी मगाउँछन् ।
शान्ति सेना जाने पल्टन हैन, के फूर्ति गर्ने ? मोज गर्ने हो भनेर लाजै नमानिकन बोल्छन् । सिडिओ र एलडिओसामु घुँडा टेकेर लम्पसार पर्छन् । निर्माणको पैसा गोजीमा हाल्छन् । हामी सिपाहीलाई निर्माण गर्ने मजदुर बनाएका छन् । सेनापतिज्यू, सुरेन्द्रले तपाईंको नाम बिकाएर भरतपुरका लजहरुमा रंगरमिता गरिरहेका छन् । हाम्रो पल्टनको पैसा पानीमा बगाएका छन् । यिनलाई त्यत्तिकै सरुवा गरी आफ्नो पौरख देखाउन सक्ने गणपति पठाइदिनुप¥यो ।
– महेन्द्र दल गणका पीडितवर्ग